स्वास्थ्य उपकरण र राहत सामाग्री खरिदमा अनियमितता हुन दिदैनौंः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विशकसेन ढकाल | Nijgadh.com
स्वास्थ्य उपकरण र राहत सामाग्री खरिदमा अनियमितता हुन दिदैनौंः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विशकसेन ढकाल
Home Unlabelled स्वास्थ्य उपकरण र राहत सामाग्री खरिदमा अनियमितता हुन दिदैनौंः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विशकसेन ढकाल
(निजगढ नगरपालिकाव्दारा उत्पादित ‘कोरना नियन्त्रणमा हाम्रो प्रयास’ कार्यक्रमको लागि नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विशकसेन ढकालसंग गोकुल घोरसाइनेको सहयोगमा पत्रकार महेश्वर अधिकारीले गरेको कुराकानी)
कोरोना भाइरस संक्रमण विपदको अवस्थामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा तपाईले निजगढ नगरपालिकामा कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ?
यतिबेला हाम्रो सबै कामको फोकस कोरोना संक्रमणविरुद्धको अभियानमा छ । हामी स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीलाई फिल्डमा परिचालन गर्ने, स्वास्थ्य सामाग्री, उपकरण र औषधि खरिद गर्ने, लकडाउनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वय गर्ने तथा यसबाट प्रभावितलाई राहत सामाग्रीको व्यवस्थापन गर्ने जस्ता काममा लागिपर्दै आएका छौं । त्यसैगरी बाहिरबाट आएका मान्छेको तथ्याङ्ग संकलन र विश्लेषण गरी आवश्यक निगरानी गर्ने कामहरु पनि भइरहेका छन । यतिबेला हामी कार्यालयको अन्य कामलाई छोडेर नगरबासीलाई कोरोना भाइरस संक्रमणबाट कसरी जोगाउने भन्ने कुरा ध्यानमा राखेर हरतरहले काम गरिरहेका छौं ।
संक्रमण विरुद्ध पहिलो पङ्गतिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरुको लागि सुरक्षा सामाग्री उपलब्धताको अवस्था कस्तो छ? र यसको प्रवन्ध कसरी भैइरहेको छ?
निजगढ नगरपालिकाले विपद व्यवस्थापनको लागि एउटा कोष खडा गरेको छ । जसबाट काम गर्ने क्रममा स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक पर्ने उपकरण र सामाग्री खरिद गरिएको छ भने थप उपकरण खरिद प्रकृयामा पनि छन । त्यसैगरी नगरबासी र कार्यालयका कर्मचारीको स्वास्थ्य सुविधालाई ध्यानमा राखेर ग्लोब, मास्क, सेनिटाइजर आदि सामाग्री पनि उपलब्ध गराइएको छ । आवश्यक थप स्वास्थ्य उपकरण र सामाग्री खरिद गर्ने प्रकृया पनि चलिरहेको छ । जहासम्म पिपिइको कुरा छ । यो देखाउनको लागिमात्रै नभएर मापदण्डअनुसार गुणस्तरीय हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौं । त्यसैले स्वास्थ्य प्राविधिकको सल्लाहा र सुझावअनुसार केही पिपिइ खरिद भरिसकिएको र थप पिपिइ खरिद गर्ने तयारीमा पनि छौं ।
सामाग्री खरिद प्रकृया चाहि कहिलेसम्म सकिन्छ होला?
यसमा तिथि÷मिति तोकेर यतिबेलासम्म खरिद गरी सकिन्छ भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिने कुरा हुदैन । विपद कायम रहेसम्म खरिद कार्य पनि भइनै रहन्छ । अहिले हामीले राहत र स्वास्थ्य सम्बन्धि कतिपय सामाग्री खरिद गरेर वितरण गरिसकेका छौं र थप केही खरिद क्रममा पनि छन । यो अवस्था रहिरह्यो भने पछि पनि आवश्यकताअनुसार सामाग्रीहरु खरिद गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । त्यसैले महामारी जारी रहेसम्म सामान खरिद गर्ने क्रम पनि जारी नै रहन्छ ।
विपत व्यवस्थापनको लागि जनशक्तिसंगै आर्थिक पक्ष पनि महत्वपुर्ण कुरा हो । तपाईहरुले कोष पनि खडा गर्नुभएको छ । त्यसलाई कसरी परिचालन र व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ?
निजगढ नगरपालिकाले ०७५ सालमा नै विपद व्यवस्थापन ऐन पास गरिसकेको थियो । तर त्यसको निर्देशिका भने तयार भएको थिएन । अहिले हामीले निर्देशिका बनाएर पारित पनि गरिसकेका छौं । कोषमा कुन स्रोतबाट रकम जम्मा हुन्छ, कसरी खर्च हुन्छ । भन्ने विषयमा निर्देशिकाले नै प्रष्ट पारेको छ । सोहीअनुसार बैङ्कमा खाता खोली कोषमा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त १५ लाख र निजगढ नगरपालिकाकोसमेत गरेर १ करोड १८ लाख रुपैया जम्मा भएको छ । हाल सोे रकम खर्च हुने क्रम पनि शुरु भइसकेको छ । यस कोषको रकम खर्च प्रकृया पनि तोकिए बामोजिम नै हुने छ । कर्मचारीले मनोमानी ढुङ्गले खर्च गर्ने कुरा हदैन । खर्चको बिल कार्यपालिकामा पेस गरिने र बिलअनुसार खर्च भएको ठिक हो भनेर स्वीकृति गरेपछिमात्र चेक काटेर रकम खर्च गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा खर्च पारदर्शी हुनुको साथै अपचलनको शंभावना पनि हुन्न ।
कोषको बैङ्क खाता कस्को नाममा संचालन हुने भन्ने बारेमा पनि केही असमझादी देखिएको थियो । खासमा यो कुरा के हो?
हामीले कुनै पनि काम गर्दा ऐन कानुनअनुसार नै गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रचलित ऐन नियमले जे भन्छ त्यहीअनुसार मात्र हुने हो । अहिले नगरपालिकासंग विपद व्यवस्थापन ऐन र निर्देशिका पनि छ । अब त्यो कोषको रकम पनि सोही ऐन र निर्देशिकाले भनेअनुसार नै हुनुपर्छ । जहासम्म अर्को खाताको प्रसङ्ग छ । यो मेयर साबहरुले विपद व्यवस्थापनको लागि खोलेको हो अलग्गै किसिमको खाता हो । निजगढ नगरपालिकालाई यो विपदको बेलामा कसैले सहयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने उहाहरुले सो खातामा रकम जम्मा गर्नसक्नु हुन्छ । यसमा सहयोगकोलागि भनेर मेयर सुरेश खनाल र उपमेयर लिलादेवी लामिछानेले सार्वजनिक रुपमा संयुक्त अपील पनि जारी गरिसक्नु भएको छ । अहिले आएर उक्त खातामा जम्मा भएको रकम पनि नगरपालिका विपद व्यवस्थापनको खातामा ल्याएर पछि जम्मा गर्ने र सोही खाताबाट खर्च गर्ने भनिएपछि अब यसमा कुनै विवाद बाँकी रहेको होला जस्तो मलाई लाग्दैन ।
विकास निर्माणको लागि छुट्याएको रकम कटाएर कोषमा राखिएपछि अब नगरको विकास निर्माण कार्यमा पनि प्रभाव पर्ने नै भयो हैन त?
कोषमा विकास निर्माणको लागि छुट्याइएको योजनाको कुनै रकम काटिएको छैन । त्यसैले यसबाट निजगढको विकासमा कुनै पनि असर नपर्ने जानकारी गराउन चाहान्छु । कोषमा मुख्य रुपमा यस बर्ष खर्च हुन नसक्ने अवस्थामा रहेको र तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, भेला जस्ता साधारण खालका कार्यक्रमहरुको रकम काटेर राखिएको हो । हामीले चालु बर्षको बजेटमा जनप्रतिनिधिहरुको तलबको लागि भनेर हामीले रकम छुट्याएका थियौं । दुई महिनको तलब भुक्तानी गरेपछि सर्वोच्चको आदेशमा हाल तलब रोकिएको अवस्थामा सो रकम त्यत्तिकै रहेको थियो । अहिले हामीले कुनै बेला पछि निर्णय भएर दिनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यतिबेला कुनै व्यवस्था गरौला । होइन भने अहिलेलाई खर्च नभएर रहेको रकम कोषमा राख्ने भन्ने निर्णय गरेका हौं । कार्यपालिका बैठकमा पर्याप्त छलफल र विचार विमर्शपछि तत् तत् शिर्षकबाट रकम काटदा नगरको विकास निर्माण कार्यमा कुनै किसिमको प्रभाव पर्दैैन भन्ने यकिन गरेरमात्रै रकम काटिएको छ । त्यसैले भोलि लकडाउन समाप्त हुदाको अवस्थामा काम गर्न समस्या नपर्ने गरी रकम व्यवस्थापन गरिएको हुदा यसले निजगढको पुर्वाधार निर्माण र विकास प्रकृयामा असर पार्ने कुनै शंभावना छैन ।
खरिद प्रकृया र सामाग्रीको गुणस्तर बारेमा पनि यतिबेला चौतर्फी प्रश्न छ । तपाईहरु भने त्यस्तो अवस्था आउन नदिन कत्तिको सचेत हुनुहुन्छ ?
यो विषयमा हामी आफै पर्याप्त सजग र सचेत छौ । सामाग्रीहरुको गुणस्तरमा कुनै संझौता हुन सक्दैन । सबै सामान बाहिरबाट आउने हुन । अहिलेको अवस्थमा सामानहरु कस्तो गुणस्तरका हुन भन्ने बारेमा प्राविधिकहरुलाई राखेर त्यसको गुणस्तर र मुल्यको बारेमा मुल्याङ्गन गर्ने गरिएको छ । यस विषयमा कर्मचारी साथीहरुलाई मैले ‘ल है यस बारेमा सचेत भएर काम गर्नुहोला’ भनेर बारम्बार झकझकाउदै पनि आएको छु । त्यसैले तपाईले भने जस्तो समस्या आउला भन्ने मलाई लाग्दैन । अर्कोतर्फ खरिद गरिएका सामाग्रीको भुक्तानी निम्ति कार्यपालिका बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यपालिका सदस्यहरुलाई यस्तो सामान आएको छ । यसको मुल्य यति छ भनेर देखाएपछि बील रुजु गरेरमात्र भुक्तानी हुने व्यवस्था छ । कार्यपालिकाले भु्क्तानीको लागि उपयुक्त छ भनेर स्वीकृति दिएपछिमात्रै हामीले चेक काटने हो । त्यसैगरी कार्यपालिकाले खरिद समिति पनि गठन गरेको छ । सो समितिले पनि यसमा पर्याप्त अध्ययन र छानबिन गर्छ । यसरी काम गर्दा तपाईले भने जस्तो कुनै समस्या आउला भन्ने मलाई लागेको छैन ।
अहिलेको अवस्थामा आवश्यक सामाग्री छिटोछरितो तरिकाले खरिद गर्नु पर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ सर्वाजनिक खरिद ऐन पनि छ । यसलाई सहज पार्ने बारेमा कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ?
हामीले अहिले पनि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै सामान खरिद गर्ने हो । घरायसी सामान किने जस्तो मनलाग्दी गर्ने कुरा हुदैन । फेरि अहिलेको विपदको बेलामा केही छोटो प्रकृया अपनाउन पनि भनिएको छ । हामीले पनि त्यही ऐन अन्तरगत केही छोटो प्रकृया अपनाएर नै खरिद गर्दै आएका छौैं । अहिलेसम्म यसबाट हामीले खासै कुनै समस्या बेहोर्नु परेको महशुस गर्नुपरेको छैन ।
लकडाउनको बेला कार्यालयमा अनुपस्थित कर्मचारीहरुलाई कारवाही गरिने भनेर पनि कुरा आएको छ । फेरि यसमा मिल्दैन पनि भनियो, खासमा यो भएको के हो?
लकडाउन निजगढमामात्रै भएको थिएन, नेपाल अधिराज्यभरी नै भएको थियो । लकडाउनको घोषणा हुने बित्तिकै धेरै कर्मचारी साथीहरु राति नै घर जानु भएको रहेछ । नेपाल सरकारले पनि जो जहा हुनुुहुन्छ त्यही नै सुरक्षित तरिकाले रहनु भनेर एउटा निर्देशन पनि दिएको थियो । अति आवश्यक सेवाका जस्तै स्वास्थ्यका कर्मचारी र केही सचिवहरुलाई किरिया र सुत्केरी बाहेक अन्यमा बिदा नछोडने भन्ने थियो । उहाहरु अनिवार्य रुपमा कार्यालयमा आउनु नै पर्नेभयो । तर अन्यको हकमा घरमै बसेर अनलाइनमार्फत पनि कार्यालयको काम गर्न सकिने भनिएको र केही दिन हामीले पनि त्यही अनुसार काम गरेका हौ । तर बाहिर चर्चामा आए जस्तो केही दिन कार्यालयमा अनुपस्थित हुदैमा विभागीय कारवाही हुने भन्ने कुरा होइन र हुदैन पनि । अर्कोतर्फ विपदको बेला भन्दैमा कार्यालयको नियमित काम रोकिनुपर्छ भन्ने पनि छैन । आवश्यकताअनुसार कार्यालयको काम सम्पादन हुनु पनि पर्छ । अर्कोतर्फ हाम्रो नगरमा कर्मचारीले अहएखटाएको काम इमान्दारी पुर्वक गर्दै आउनुभएको छ । यसको लागि कर्मचारी साथीहरुले सहना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नगरबासीलाई कोरोना भाइरसबाट जोगिने उपाय बारेमा तपाईले के सुझाव दिन चाहानुहुन्छ?
यो निजगढको र नेपालको मात्रै पनि समस्या होइन । आज यो विश्वव्यापी समस्याको रुपमा रहेको छ । रोगले सानो, ठुलो, धनी गरीव भनेर मानिस नछुट्याउने रहेछ । यो रोग मानिस÷मानिसको संसर्गबाट अर्को मानिसमा सर्ने भएकोले यसमा सामाजिक दुरी कायम राख्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । बढी हिडडुल गर्ने, भिडभाडमा बस्ने मानिसलाई संक्रमणको शंभावना पनि बढी नै हुदो रहेछ भन्ने बुझियो । त्यसैले म सबै निजगढबासीहरुमा अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिरफेर नकिस्किन र घर परिवारमा पनि सामाजिक दुरी बनाएर बस्नुहुन अनुरोध गर्दछु । हुन त यतिबेला खेतिपातिमा कामको चाप पनि होला तर पनि परिवारभित्रैकै सदस्यहरुको सहभागितामा सामाजिक दुरी बनाएर काम गर्दा जोखिमबाट बच्न सकिन्छ । हाम्रो छिमेकी जिल्ला पर्सा र रौतहटमा पनि संक्रमण देखिइसकेकाले अवस्थामा हामीले थप होसियार बन्नु पर्ने भएको छ । त्यसैले कुनै किसिमको लापर्वाही नगरी सरकारको निर्देशनबमोजिम अझै केही दिन घरमै एकान्तबास बस्न र सरसफाईमा पर्याप्त ख्याल राख्न सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहान्छु ।
By Nepali Computer Technology on 1:27 AM